Fampianarana – Page 2 – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Talohan’ny nahitan’i Lotera ny fahazavana tao amin’ny Soratra Masina dia Andriamanitra mahatahotra, sarotra hatonina, mampihorohoro ny amin’ny fahaverezana ao amin’ny helo sy ny afo fandiovana, izany no Andriamanitra fantany. Noho ny fahazavan’ny Filazantsara tao am-pony anefa dia tsapany fa Andriamanitra dia Andriamanitra te hifandray amitsika mandrakariva. Izany indrindra no mahatonga azy hilaza ao amin’ny foto-pianarana lehibe fa didian’Andriamanitra isika hangataka […]
Akon’ny Isantaona 2017 Toby Nenilava Faradofay
MISAOTRA AN’I JESOSY KRISTY TOMPO, fa tontosa soa aman-tsara tamin’ny 08 ka hatramin’ny 15 Janoary lasa teo ny Isan-kerintaonan’ny Toby Nenilava Faradofay, Toby mirafitra amin’ny Tobilehibe Ankaralamalaza. Faneva : « Mitadiava an’i Jehovah, dia ho velona ianareo » Amosa 5.6a Koa indreto misy ako an-tsary sy feo vitsivitsy, mba tsy ahatompon-trano mihono ny Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM) miparitaka manerana izao tontolo […]
EPIFANIA, fanehoan’Andriamanitra ny Voninahiny! Inona moa izany hoe, « EPIFANIA » izany? Voambolana fampiasan’ny fanjakana Romana hilazàna ny fisandràtan’ny mpanjaka na [empereur] eo amin’ny seza fiandrianany sy fisehoany eo amin’ny vahoakany, ny hoe « epifania »; ambara ho fisehoan’ny famirapiratan’ny voninahiny sy ny fahefany izany. Aseho miaraka amin’izany fanandratana ny mpanjaka na « empereur » izany koa ny miaramila manao matso (parade militaire), maneho ny heriny […]